T-629 ATAK Assault Helicopter | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေT-629 ATAK Assault Helicopter
T-629, T-129 ATAK တိုက်ခိုက်မှုနှင့် Tactical Reconnaissance Helicopter စီမံကိန်းတို့မှရရှိသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူTürkHavacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ၎င်းသည် (TAI) မှထုတ်လုပ်သည့်ထိုးစစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်သည်။
T-629 Attack Helicopter ၏ "Conceptual Design Start" ကိုတူရကီလေကြောင်းနှင့်အာကာသလုပ်ငန်း၏အရင်းအမြစ်များဖြင့်တီထွင်ခဲ့သော ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် T-14 သည် ATAK-II ကဲ့သို့လူသိများသောစီမံကိန်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ T-2017 ၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများသည်များစွာပြီးမြောက်ကြောင်းလူသိများသည်။
ရဟတ်ယာဉ်စီမံကိန်းဖြစ်သောတူရကီ၊ ထိုးစစ် ၅ တန် T-629 Attack နှင့် Tactical Reconnaissance Helicopter တို့မှရဟတ်ယာဉ်များအကြားအလယ်အလတ်တန်းစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိခြင်းကြောင့် T-129 T-629 မှတစ်ဆင့်ပြီးခဲ့သည့်တူရကီ Aerospace Industries ၏တိုက်ခိုက်မှုသုံးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ T-129 Assault Helicopter သည်အလေးချိန် ၆ တန်ခန့်ရှိသော T-129 ATAK Assault နှင့် Tactical Reconnaissance Helicopter တို့နှင့်ဆင်တူသည်။ T-629 ATAK ထက်အလေးချိန်ပိုမိုလေးသော T-20 တွင်ခဲယမ်းမီးကျောက်များအထူးသဖြင့် ၂၀ မီလီမီတာအမြောက်များနှင့်အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
T-2023 Assault Helicopter သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ပျံသန်းရန်စီစဉ်ထားပြီးGÖKBEYအထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ရဟတ်ယာဉ်နှင့်သာမန်စနစ်များကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
Safety ၏ပထမဆုံး T-129 ATAK ရဟတ်ယာဉ်ညီလာခံလိုင်း
ဧရာတိုက်ခိုက်ဘို့ Boluda ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း
၃၀ KARSAN မှ Manisa အထိတိုက်ခိုက်မှုများ
Malatya အရေအတွက်တိုက်ခိုက်ရာမှ Karsan 13!
Gevaş - Gürpınar Junction - Çatak - Beğendikလမ်းများအတွက် Aksa Project ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ…
အစ္စတန်ဘူလ်ယာဉ်အသွားအလာ Attack စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်
Çatakတံတား Samsun ပျက်စီးခဲ့သည်
T-129 ATAK ရဟတ်ယာဉ်များပေးပို့ခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားရသနည်း။